रहफभन्दा पहिले साउदी अरबबाट भागेका युवतीहरूको अवस्था कस्तो छ? - BBC News नेपाली
रहफभन्दा पहिले साउदी अरबबाट भागेका युवतीहरूको अवस्था कस्तो छ?
तस्वीर कपीराइट Salwa
रहफ अल-कुनुनको कथा ट्विटरमार्फत् संसारभरिका मानिसहरूसम्म पुग्यो र हाल उनी शरण पाएपछि क्यानडामा छिन्। तर साउदी अरेबियाबाट विगतमा पनि युवतीहरू सुखद भविष्यको खोजीमा भागेर विदेश गएका थिए जसको चर्चा यसअघि भएको थिएन।
चौबीस वर्षीया साल्वा आफ्नी १९ वर्षीया बहिनीसँग आठ महिनाअघि भागेकी थिइन्। उनीहरू क्यानडाको मोन्ट्रियल नगरमा बस्छन्।
उनको कथा उनकै शब्दमा
हामी करिब छ वर्षअघि देखि नै भाग्ने तयारीमा थियौँ। तर हामीसँग राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र थिएन। मलाई ती कागजात बनाउन बुवाआमाको अनुमति चाहिन्थ्यो। (साउदी महिलाहरूलाई धेरै काम गर्न आफ्ना पुरुष आफन्तको अनुमति चाहिन्छ।)
म विश्वविद्यालयमा पढ्दा मेरा अभिभावकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइदिएका थिए। त्यसैकारण म केही भाग्यमानी भएँ। दुई वर्षअघि अङ्ग्रेजीको परीक्षाको लागि भनेर मेरो राहदानी पनि बनाइएको थियो। तर मेरो परिवारले त्यो खोसिदियो। पछि मैले फेरि त्यो हात पार्न सफल भएँ।
मैलै मेरो दाजुको घर छिर्ने साँचो चोरेर बजारमा गएर अर्को नक्कली साँचो बनाएँ। म घरबाहिर निस्कन उनीहरूको अनुमति थिएन। तर म उनीहरू सुतेको बेला भागेँ। त्यो निकै जोखिमपूर्ण काम थियो किनभने म समातिएकी भए उनीहरूले मलाई कुटपिट गर्ने थिए।
मैले नक्कली साँचो बनाएपछि मेरो र बहिनीको राहदानी अनि बुवा सुतेको बेला उहाँको फोन लिन सफल भएँ। त्यसपछि मैले गृह मन्त्रालयको वेब्साइटमा गएर उहाँको नम्बरलाई मेरो नम्बरमा बदल्न सफल भएँ। त्यसपछि मैलै उहाँको एकाउन्टमा लग इन गरेर हामीलाई देश छोड्ने अनुमति पनि लिन सफल भएँ।
चार दिनको सन्तापपछि साउदी युवती भन्छिन्, 'म खुसी छु'
सबै जना सुतेको बेला हामी रातिको समयमा घर छोड्न सफल भयौँ। त्यो एकदमै तनावपूर्ण क्षण थियो। हामीले कार चलाउन नसक्ने भएकोले एउटा ट्याक्सी बोलायौँ। भाग्यवश साउदी अरेबियाका सबैजसो ट्याक्सी चालक विदेशी हुने हुनाले हामीले एक्लै यात्रा गरेकोमा कसैले शङ्का गरेनन्।
त्यसपछि हामी रियादको राजा खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गयौँ। हामीले के गर्दैछौँ भनेर यदि कसैले थाहा पाएको भए सम्भवत: हामी मारिने थियौँ। म विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दाको पछिल्लो वर्ष म अस्पतालमा काम गर्दथेँ। त्यतिबेला मैले केही रकम जोगाएकी थिएँ। मैले बेरोजगारी भत्ता बापतको रकम पनि जोगाएकी थिएँ। त्यो मलाई विमानको टिकट र जर्मनीको ट्रान्जिट भिसा लिन पर्याप्त भयो।
हामी घरमा नभएको थाहा पाएपछि बुवाले प्रहरीलाई फोन गर्नु भएछ। त्यो त्यतिबेला निकै ढिलो भइसकेको थियो। प्रहरीले बुवालाई फोन गर्न लाग्दा फोन मकहाँ आइपुग्यो किनभने मैलै सरकारी बेव्साइटमा बुवाको नम्बर नै बदलिदिएको थिएँ। जब म विमानबाट ओर्लिएँ प्रहरीले बुवालाई पठाएको सन्देश मेरो फोनमा आयो।
साउदी अरेबियाको जीवन, के जीवन? म विश्वविद्यालय जान्थेँ अनि घर जान्थेँ। दिनभरि केही काम हुँदैनथ्यो।
पुरुषहरूले मलाई चोट पुर्‍याउँदथे र भन्ने गर्दथे कि पुरुषहरू महिलाभन्दा ठूला हुन्। मलाई रमादान पर्वको बेला पनि प्रार्थन गर्न र केही नखाई व्रत बस्न बाध्य तुल्याउँथे।
मलाई शरण दिन क्यानडा सहमत भयो। जब म टोरोन्टो विमानस्थल आइपुगेँ मैले पर क्यानडाको झन्डा देखेँ। त्यतिबेला मलाई ठूलै कुरा प्राप्त भएको अनुभव भयो। अहिले म मेरी बहिनीसँगै मोन्ट्रियल नगरमा छु। मलाई कुनै तनाव छैन। मलाई कसैले यो गर त्यो नगर भनेर दबाव दिँदैन।
मलाई यो कुराले एकदमै धेरै खुसी बनाउँछ। म स्वतन्त्र छु जस्तो लाग्छ। मलाई जे लगाउन मन लाग्छ म त्यो लगाउन सक्छु। मलाई यहाँको शरद ऋतुको रङ्ग मन पर्छ। मलाई यहाँको हिउँ पनि मन पर्छ। म फ्रान्सेली भाषा सिक्दैछु। त्यो एकदमै गाह्रो छ। म साइकल चढ्न, पौडी खेल्न र आइस स्केट खेल्न पनि सिक्दैछु। म जीवनमा केही गर्दैछु जस्तो लाग्दैछ।
म मेरो परिवारसँग सम्पर्कमा छैन। त्यो मेरा लागि राम्रो हो, त्यो उनीहरूका लागि राम्रो हो। मलाई अहिले यहीँ आफ्नो घर हो जस्तो लाग्छ। मलाई यहाँ एकदमै राम्रो छ।
(बीबीसी विश्व सेवा रेडियोको 'आउटसाइड् सोर्स्' कार्यक्रमका ग्यारेथ इभान्ससँगको कुराकानीमा आधारित)